LiveU သည်ပထမဆုံးအနေဖြင့် Live Coverage အတွက်ပထမဆုံး 5G ဆယ်လူလာဆက်သွယ်မှုယူနစ်ကိုပြသလိုက်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » LiveU တိုက်ရိုက်လွှမ်းခြုံများအတွက်ပထမဦးစွာပေါင်းစည်း 5G ဆယ်လူလာ Bond ယူနစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသ
LiveU ယနေ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ newsgathering နှင့်တိုက်ရိုက်အားကစားလွှမ်းခြုံ၎င်း၏သစ်ကိုအပြည့်အဝလိုက်နာ 5G LU600 ဖြေရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ ပြည်တွင်းရေး 5G modems နှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အင်တင်နာ LiveU ရဲ့ဆုရ 6K HEVC နည်းပညာနှင့်အတူပေါင်းစပ် 5G နှင့် 4G အားလုံးကိုခွဲ 4GHz ကြိမ်နှုန်း, ဖုံးအုပ်နှင့်တကွ, LU600 5G ဖောက်သည်အရှိဆုံး, အစွမ်းထက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်အနာဂတ်-အထောက်အထားဆယ်လူလာဂီယာဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။
ရှမွေလသည် Wasserman, LiveU ၏ CEO & Co. , တည်ထောင်သူ, LiveU အမြဲထုတ်လွှင့်နည်းပညာ၏ရှေ့တန်းမှမှာခဲ့ "ဟုပြောသည်။ 5G ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အဓိကမြို့ကြီးများကိုဖြတ်ပြီးလျှင်မြန်စွာထုတ်လှိမ့်နှင့်အတူ, ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်ရှေ့ဆက်ဂိမ်းနေဖို့ထက်ပိုကျူးလွန်ပါပဲ။ ဘက်ပေါင်းစုံ 600G modems နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အ LU5 5G ဖြေရှင်းချက်ပိုမြန်အမြန်နှုန်းနှင့်နောက်မျိုးဆက် 5G ကွန်ရက်များကထောက်ပံ့ပေးအာမခံချက်မြင့်မားသော bandwidth ကိုအပြည့်အဝအားသာချက်ကြာပါတယ်။ "
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 5G ဆယ်လူလာကြိမ်နှုန်းထောက်ပံ့ခြင်း, LU600 5G ပင်သိပ်သည်းဒေသများရှိနိမ့်ဆုံးနှောင့်နှေး, အမြင့်ဆုံးသောဗီဒီယိုအရည်အသွေးနှင့် resolution ကိုနှင့်အစာရှောင်ခြင်းဖိုင်ကိုအပ်လုဒ်အပါအဝင်အသစ်ကကွန်ယက်များ, အပေါငျးတို့သအကျိုးကျေးဇူးများခံစားရန်အသုံးပြုသူများအားနိုင်ပါတယ်။ 5G အားဖြင့် enabled အဆိုပါစူပါအနိမ့်အောင်းနေချိန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ 4K အားကစားဘဏ်ဍာများအတွက်အထူးအကျိုးရှိပါတယ်။ 5G ကျေးလက်ဒေသများတွင်သို့မဟုတ်ကွန်ရက်တည်ဆောက်ထွက်နေစဉ်အတွင်းဥပမာအားဖြင့်, မရရှိနိုင်ဘယ်မှာ high-quality လွှမ်းခြုံချောမွေ့စွာဆက်လက်။ အသက်ရှင်သောထုတ်လုပ်မှု Non-5G ဒေသများသို့ဖြတ်သန်းသွားသည်လျှင်, LiveU ယူနစ်ကိုအလိုအလျောက် 3G / 4G / 5G modems မဆိုပေါင်းစပ် supporting ရရှိနိုင်သောကွန်ရက်များ bonds ။
Wasserman "ကျနော်တို့က bandwidth ကိုများနှင့်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များအများဆုံးအသုံးပြုမှုကိုအောင်ထွန်းသစ်စ 5G ကွန်ရက်များနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြမှကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဦးဆောင်ဆက်သွယ်ရေးအော်ပရေတာနှင့်အတူနီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေအပြိုင်ခုနှစ်တွင်။ " ဆက်လက်
အမေရိကန်မှာတော့ LiveU နှင့် AT & T ကအစစ်အမှန်-အလုပ်သက်ရောက်မှုစမ်းသပ်, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှသတင်းနှင့်အားကစားထုတ်လွှင့်တက်သည်ပူးပေါင်းခဲ့ကြပြီး performance ကိုတိုးမြှင့်မှုများ 5G နည်းပညာ LiveU ယူနစ်ကို အသုံးပြု. တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သောဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ရှိပါတယ် - မကြာသေးမီက NBA နွေရာသီတစ် 5G-based ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်ရုပ်ပြ လိဂ်။ တခြားနေရာ, LiveU တောင်ကိုရီးယားမှာအီတလီနိုင်ငံ Vodafone နှင့် KT ကော်ပိုရေးရှင်းအပါအဝင်အခြားဦးဆောင်အော်ပရေတာနှင့်အတူ 5G စမ်းသပ်မှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင်တောင်ကိုရီးယားအတွက် LiveU အောင်မြင်စွာကမ္ဘာတဝှမ်းငါးခုနိုင်ငံများသို့တိုက်ရိုက် SK Telecom ရဲ့ 100G wireless network ကိုတဆင့်ယာယီအစိုးရဖို့ 5th နှစ်ပတ်လည်နေ့သံစုံတီးဝိုင်းအခွန်ဆက်ထုတ်လွှင့်။
Wasserman ကျနော်တို့ပြီးသားအကြီးအကျယ်အစားထိုးလိုက်ပါတယ်ဘယ်လိုဆယ်လူလာ Bond ကိုမြင်ရပါတယ် "တက်ချုပ်ဖော်ပြ ဂြိုဟ်တု တိုက်ရိုက်သတင်းလွှမ်းခြုံများအတွက်ဂီယာ။ 5G ၏တန်ခိုးနှင့်တကွ, အလားအလာတိုက်ရိုက်အားကစားထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစားတိုင်းအဘို့အပင်ပိုမိုကြီးမားသည်။ "
IBC600, RAI အမ်စတာဒမ်, စက်တင်ဘာလ 5-3, 62 မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်အပေါ်သစ်ကို LU2019 13G (17.B2019) အပါအဝင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ IP ကိုဗီဒီယိုကဖြေရှင်းချက်၏ LiveU ရဲ့အပြည့်အဝအကွာအဝေးကိုကြည့်ပါ။ ဒါ့အပြင် display ကိုပေါ်ဦးဆောင် FIA ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲချန်ပီယံရှစ်ရဲ့ပြိုင်ကားကားတစ်စီးဖြစ်လိမ့်မည်!
Globecast သည် Denis Genevois ကို VP Marketing Group သို့လည်းကောင်း၊ Olivier Zankel ကို VP Communication Group သို့တိုးမြှင့်သည် - ဇွန်လ 3, 2020
4G 4K 5G ဆယ်လူလာကပ်လျက်တည်ရှိ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဆယ်လူလာ Bond ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HEVC isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော သတင်း SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows အားကစား ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-09-10
ယခင်: IBC 2019 မှာဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်သက်သေပြ AI အ-မောင်းနှင်စာရင်းပေးသွင်းထားသူထောက်လှမ်းရေးပလက်ဖောင်းပြ Paywizard
နောက်တစ်ခု: Villagio အကြီးတန်းနေထိုင်မှုဥက္ကလာဟိုးမားစီးတီး @ အစားအစာ SERVICE ကိုအလုပ်သမား (FULL-TIME)